अध्यक्ष ओलीले बनाए ११ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल, को को हुन् उनि ? — Imandarmedia.com
अध्यक्ष ओलीले बनाए ११ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल, को को हुन् उनि ?
काठमाडौ। नेकपा एमालेले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि ११ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल बनाएको छ। मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ११ सलस्यीय अध्यक्ष मण्डल बनाइएको हो।
अध्यक्ष मण्डलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीमबहादुर रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल रहेका छन्। त्यस्तै, एमालेले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा,
टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, लालबाबु पण्डित र गोमा देवकोटा रहेको अध्यक्ष मण्डल बनाएको हो। महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व छनोट गर्नुअघि बन्दसत्र सञ्चालनका लागि अध्यक्ष मण्डल गठन गरिएको हो।
अध्यक्षमण्डलले गरेको निर्णय लेख्न माइन्युट कमिटी पनि बनाइएको छ। जसमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सूर्य थापा, विष्णु रिजाल, मनोज थापा, ठाकुर गैरे, गोविन्द नेपाली र ज्वालाकुमारी साह रहेका छन्।
एमालेमा यो पटक विभिन्न पदहरुमा निकै ठूलो प्रतिशपर्धा देखिने भएको छ। एमालेमा ओली प्यानल, १० भाईको एउटा प्यानल र पूर्वमाओवादी नेताहरुको प्यानलसहित तीन प्यानल चुनावी प्रतिशपर्धामा होमिने छ।
अध्यक्षका लागि उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। बरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र सुवास नेम्वाङले दावि पेश गरेका छन् तर उमेदवारी घोषणा भने गरेका छैनन्।
तेस्तै, नेकपा एमालेका अध्‍यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष भीम रावलबीच कुरा मिलेको छ। रावलले ओली विरुद्ध अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन लड्ने घोषणा गरेपनि ओलीले आफूले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताए।
उनले रावलको उम्मेदवारीले आफूलाई चुनौती नदिए बताए। रावलले पनि आफूले कसैलाई चुनौति नदिएको बताएका थिए। यहाँनीर दुई नेताबीच कुरा मिलको छ।
मंगलबार सम्‍पादकसँगको अन्‍तर्क्रियामा अध्यक्ष ओलीले रावलले आफूमाथि माया देखाएको बताए। रावल जिले मलाई चुनौती दिनु भएको छैन, उनले भने, ‘माया देखाउनु भएको छ। उहाँले कुनै चुनौती भन्नु भएको छैन। स्नेहपुर्ण सुझाव हो।
‘निर्विकल्प हुन पाए वा क्या भन्ने नै हुँदैन। म उठ्ने भएँ भने कोही अरु नउठे हुन्थ्यो पनि भन्दिनँ। कसैलाई अलिकति पनि दबाब महसुस हुने अभिव्यक्ति दिँदिनँ,’ उनले भने।
आफूले अहिलेसम्म उम्मेदवारी घोषणा नगरेको भन्दै ओलीले भने, ‘म कसैलाई उमेदवारी फिर्ता लेउ वा किन उमेदवारी घोषणा गर्यौ भन्दीन् । म अहिलेसम्म उठ्ने र नउठ्ने ठेगान छैन्।
लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नजरअन्दाज नगरी सहमति हुन्छ भने राम्रो कुरा हो। सहमति हुँदैन भने कसैलाई करकाप गरेर भाँजो हाल्दिनँ ।’ उनले भने।
नेकपा एमालेको १० औँं महाधिवेशन आउन अब केही घण्टा मात्र बाँकी छ। नेतृत्व चयनका लागि हुन लागेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष देखि केन्द्रीय सदस्यसम्म कयौँ नेताहरु आकांक्षी देखिएका छन्।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत गर्न चाहेको यो महाधिवेशन आकांक्षी धेरै भएकाले निर्वाचन हुने निश्चित छ। यसबीच अध्यक्ष ओलीले ठूलो घोषणा गरेका छन् ।
ओलीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव लगायतका पदाधिकारीमा आफ्नो कुनै छनोट नभएको बताएका हुन्। एमालेको दशौं महाधिवेशन १० मंसिरमा चितवनमा सुरु हुँदैछ, तर पदाधिकारीका आकांक्षीहरुले मुख खोलेका छैनन्। उनीहरु अध्यक्ष ओलीको संकेत पर्खिरहेका छन् ।
यस्तै ओलीले माधवकुमार नेपालसहितको नेताहरु बाहिरहँदा विवाद अन्त्य भएको बताएका छन्। सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष ओलीले भने केही मानिस चोइटिएर जाँदा ल्याङल्याङ सकिएको बताए।
‘सञ्चार माध्यमहरुले एमालेका कति ल्याङल्याङ भनेका थिए। केही मानिस चोइटेर गएका छन्। त्यसले ल्याङल्याङ अन्त्य गरेको छ’, ओलीले भने, ‘एमाले फुट्यो कमजोर भयो भनिएको छ तर हामी सत्तामा थियौं।
‘प्रतिपक्षमा मात्रै पुगेका छौं । शुद्धिकरण र सुढृदीकरणको अवसरमा मिलेको छ । केही मानिसहरु चोइटिएर जाँदा पार्टी शुद्धिकरण सुदृढ भएको छ।’ उनले भने।एमालेमा अध्यक्षका लागि केपी ओली र भीम रावव, बरिष्ठ उपाध्क्षका लागि,
माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा, महासचिव इश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङले दावि गरिरहेका छन्। त्यस्तै महासचिवमा विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, संकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेले दावि गरिरहेका छन्।